China Mkpụrụ na-enweghị ntụpọ na-enweghị mmanụ Liquid ntọala zuru ezu mkpuchi 20ml na-adịgide adịgide etemeete ntọala na SPF15 ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Jinfuya
Udidi Matte imecha, Full mkpuchi, Ezigbo, Long-adịgide adịgide, Waterproof, Enweghị ntụpọ imecha. Light Ibu, Mmanụ na-enweghị usoro ， Na SPF15
Adabara Ihe karịrị ndo 40 nwere ike dakọtara na ụda anụ ahụ niile
Ọdịnaya Net 0.68 fl oz. (20 ml)
Ọrụ Na-eweghachi anụ adịghị edozi, usoro mmiri mmiri zuru oke maka ụdị anụ ahụ niile
Ebumnuche na-enweghị ntụpọ zuru ezu bụ ngwa agha nzuzo gị iji tinye ihu gị kachasị mma. Ihe dị nsọ nke ntọala zuru ezu, mmiri mmiri ara ehi a na-asọgharị na-achagharị na akpụkpọ anụ dịka nrọ - na-eme ntọala maka ụdị anya obi gị chọrọ. Maka akwa mkpuchi, jikọta ya na moisturizer gị kwa ụbọchị. Maka igirigi igirigi, jikọta ya na moisturizer ihu ihu. Tọọ jiri ngwa ntụ ntụ maka ụzọ dị ntakịrị, ma ọ bụ nwee obi ike na egbugbere ọnụ Red na oji ojii maka ndị na-eme ihe kachasị.
Ntọala anyị na-eme ka mma nke kachasị mma nwee ike ịnweta ihu ọ bụla. Ebumnuche gị enweghị njedebe, anyị na-esikwa n'ike mmụọ nsọ mee ka ị bụrụ ihe pụrụ iche. Site na mbụ na-eme nchọpụta na-emekarị-mara mma junkie-glam ma ọ bụ iferi ihu, minimalist, maximalist na bụla anya na-anyị bụ maka ọ bụla anya, egbugbere ọnụ, na ihu. Nganga na-100% vegan na obi ọjọọ-free, n'ụwa nile.
Chọpụta ihe kpatara anyị ji hụ ntọala a n'anya:
1.Lightweight, mkpuchi zuru oke, usoro enweghị mmanụ na-agwakọta nke ọma na akpụkpọ maka ọmarịcha ọkara matte mara mma nke na-adịgide ụbọchị niile.
2.Liquid usoro na-eweghachi eweghachi anụ ahụ anụ ahụ na-aj u nke pụtara ìhè chawapụrụ anụ.Na-enye SPF-15 iji kpuchido akpụkpọ gị megide mmebi anwụ.
3.Cruelty-free, vegan na 100% na-enweghị Phthalates, Parabens, Nonylphenol, Ethoxylates, Triclosan, Triclocarban, na Hydroquinone.
Nke gara aga: Full mkpuchi mmiri mmiri concealer 6ml matte imecha 16 awa ogologo na-adịgide adịgide etemeete concealer na elu mma
Osote: N'ogbe Silky Liquid Foundation 8 agba Weightless 30ml na eke creamy udidi na Moisturizing Formula
Etemeete Foundation Liquid
Ntọala Mmepụta Liquid
Etemeete Liquid Foundation
Full mkpuchi mmiri mmiri concealer 6ml matte imecha ...
Clear Lip egbugbere ọnụ Moisturizing Vegan egbugbere ọnụ Care Mak ...
Omenala Logo Matte lipgloss Long-adịgide adịgide 40 colo ...
Private Label dara Shimmer Lipgloss Vegan C ...
Private Label Etemeete ime iha Waterproof Soft Mine ...